Abantu abaningi basebenzisa bendabuko, kodwa akaphelelwa ukuthandwa izesekeli ebusika like amagilavu. Isikimu ukunitha imikhiqizo enjalo kungaba cishe noma yikuphi.
Inketho elula - ukusebenza phambi efekethisiwe. Kodwa craftswomen abanale abanye isipiliyoni kanye imiklamo eziyisisekelo kungenzeka babe nesikhathi ngizithola. Kulokhu, zisiza amacebo ezithakazelisayo enhle ukunitha amagilavu izinaliti ukuthi kuzodala esisebenzayo hhayi kuphela, kodwa futhi into ekhangayo.
Yiqiniso, umsebenzi onjalo kudinga isikhathi esengeziwe nomzamo, kodwa kuyakufanelekela it. Ikakhulukazi uma udinga amagilavu isipho. Isikimu ukunitha ingase ihlanganise ezihlukahlukene namasu:
Lesi sihloko sizodingida onobuhle ababili ukuthi mahle egqoke ebusika, futhi isipho.
Ukuze amagilavu kudingekile ukukhetha olufudumele zonke izinhlobo etholakalayo ntambo. Njengoba sazi ukuthi lena kuphela Ukuvikelwa isandla phakathi nokuvakasha kwazo emakhazeni, kungcono uhlale uvolo impahla. Uma seamstresses uncamela mohair noma Angora, ungasebenzisa lezi izintambo.
Too ntambo obukhulu kuyinto engathandeki, njengoba akunakwenzeka ukuba embule ngokugcwele ubuhle iphethini, ikakhulukazi uma isikimu ukunitha zezingane amagilavu izinaliti. I ukujiya elikhulu - 200-250 m / 100 g
Kuphi ukuqala ukunitha
Esithombeni kuboniswe ekuqaleni kwalesi sihloko, amagilavu ngephethini ngakuthathu. Ukuze uthole isibonelo esinjalo kahle ntambo yanoma yimuphi umbala inhlanganisela shades eziningana.
Ukutholakala nakida e ubudlelwano, ukusiza kumiswa izimbobo ezincane, angabizwa ngokuthi iphethini filigree. Nakuba izimbobo empeleni ezincane.
Uma inkosikazi efuna baphathe ukunitha izinaliti openwork amagilavu, isikimu ubudlelwano kufanele ibekwe nje kuphela ngemuva, kodwa futhi ku ingaphakathi umkhiqizo.
Ukuze usebenze kudingeka iqoqo spokes ezinhlanu iDemo. Ekuqaleni, bobabili ukuthola loop ngoba umugqa wokuqala (inombolo ibalwa isampuli control).
Ngaphezu kwalokho, zonke izihibe zabiwa ku izinaliti ezine futhi obumbene nokunwebeka imigqa isiyingi. Khona-ke ukungena iphethini kuyiqiniso, kumelwe kufanelane uqale amagilavu: ukunitha isikimu A.2 kubonisa oda cuff.
Inguquko kungxenye main
Ezingeni ukuphakama 10 cm kusukwa ukuhlelwa kufanele sokuqeda gum bese uya iphethini ukunitha.
Isibalo esingaphezulu kwengxenye ngaphambili ukuluka Indwangu efekethisiwe: engxenyeni engaphakathi kanye isithupha. Ukuze umhlobiso is wathungela iphethini kwi ngemuva amagilavu. Isikimu ukunitha nomhlobiso kuboniswe sibalo ngenhla kanye wawubona isiqu A.3.
Ukungeza izihibe emisha eqala ngemva engaba mihlanu amasentimitha obumbene ingxenye eyinhloko kuwebhu. Mark umaka owodwa iluphu at ibanga 3-4 loops kwesokunxele strip Ornamental (enkulu ekwakhekeni amagilavu kwesokudla). Khona-ke, ngokusebenzisa uchungechunge benze kwalokho:
Omunye iluphu extra kulowo imakwe umaka, futhi ngemva eyodwa.
Khona-ke, ngokusebenzisa uchungechunge eyodwa iluphu sengezwe lowo owayephatha sinezela umugqa wangaphambilini kuqala. Lo mjikelezo wesibili wanezela ngemva kwalokho ingezwe ngomzuzwana.
Okwengeziwe ukwenza nje unxantathu ayixhumene mayelana ngamasentimitha amane ukuphakama.
Khona-ke, sonke iluphu unxantathu udluliselwa iphini ukunitha noma ngentambo obukhulu futhi ushiye ilindele.
Umsebenzi uyaqhubeka imigqa isiyingi, sisebenzisa inani elifanayo izihibe, okuyinto eye yaba phezu izinaliti ukuze unxantathu obumbene.
Lapho kufaneleka, zibonise ukuthi ukuphakama esewonke ikhaba isiphelile umunwe kancane, sekuyisikhathi ukuqala ukusika.
Kunwetshwa mitten phezu flat ukuze unxantathu waphenduka umunwe ngakwesokunxele (lapho ijezi izesekeli ngakwesokunene), kufanele kuphawulwe ekugcineni ezimbili loops phezu spokes: kwesokunxele bese kwesokudla.
Ngokulandelayo, provyazyvat ndawonye (ukusika) emgqeni ngamunye iluphu ngaphambi nangemva iluphu ekhethiwe. Ngakho ngendwangu irowu ngeke zingancishiswa ngokushintsha izihibe ezine. Ngenxa yalokho, kufanele kubunjwe Isigaxa Lihle flat.
Kumele ubuyele izihibe idluliselwe iphini ukunitha. Basuke basakaza phakathi izinaliti ezimbili futhi obumbene ukuphakama oyifunayo, njalo enza efanelekayo.
Khona-ke kamuva, wawukhona izihibe amane emgqeni ngamunye. Kufanele uthole ithiphu pointy we amagilavu.
Izimiso echazwe ngokunezela kanye nokunciphisa izihibe udaba oluphathelene okuyinto iphethini isebenzisa isisebenzi onekhono.
Okulandelayo kubonisa ezithakazelisa isithombe, kodwa ngempela inselele ngu amagilavu.
Zenziwa lwamaphethini jacquard ngemibala emibili.
Manje kuba ukuhlukahluka ethandwa kakhulu lwamaphethini nge izikhova. Zingase kahle isetshenziselwe amagilavu obumbene. Owl ukunitha umdwebo oboniswe ngezansi, nayo kwakheka inqubo Jacquard.
It zingafakwa ngemuva amagilavu, kanye ngaphakathi phambi uthayi efekethisiwe.
Isici esiyinhloko amaphethini jacquard ukuthi non-yokusebenza ngentambo selibekiwe phakathi izihibe ohlangothini olungafanele. Ukuze ugweme broaches kufanele okwakuthandelene ibhizinisi futhi okungezona ngentambo.
Lokhu ngokuvamile kwenziwa ngesikhathi esingaba izihibe eziningana (ezintathu kuya kweziyisihlanu). Kuyadingeka ukuba bagcine ukungezwani lesifanele. Uma kalula ukunitha, kuba okuxekethile futhi, qinisa uma ungathola umkhiqizo mancane kakhulu kunalawo okuhleliwe.
amagilavu wathungela akudingekile ukuwapheka ngesitimu kunokuwabilisa kahle insimbi - ziba soft futhi ulahlekelwe isimo sabo. Kungcono nje ubageze ngamanzi afudumele futhi omile ifomu zenzeka.
Autumn isigqoko ngezandla zakhe ngezinto ezahlukene